Download Beechcraft D18S Amphibie FSX - Rikoooo
Downloads 20 962
Mpanoratra: Milton Shupe, Gauges nosoratan'i Scott Thomas, Textures nosoratan'i André Folkers, Urs Burkhardt, Damian Radice, Manfred [Mani] D.Saliger, feo avy amin'i Nigel Richards, pontoons modelin'i Bill Ortis,
Nohavaozina taminy 16 / 02 / 2018: Vaovao FSX 3D modely natokana ho an'ny 100D sy XNUMX% Prepar3D v4 +. Fanampiana litera roa vaovao, sary manakona sarimihetsika sy karazan-tsoratra, antontan-taratasy feno. Tsy misy pananana 2d ity add-on ity dia azo alefa amin'ny VC ihany.
Ity fonosana ity dia manome modely roa (cargo sy mpandeha), fandefasana ordinatera sy fefy, feo manokana sy tena izy, modely modely manakaiky ny zava-misy, anisan'izany ny laharana efatra.
Iray amin'ireo seaplanes maimaim-poana indrindra ho an'ny mpanafatra fiaramanidina. Modely mahafinaritra miaraka amin'ny cockpit virtoaly sy ny mozika mahatalanjona tena tsara izay manapotika tanteraka anao amin'ny simulation.